GS65 Stealth 9SD In-depth Review
GS65 9SD In-depth Review (msi GS Series)
လက်ရှိ Daily Driver အနေနဲ့ သုံးဖြစ်နေတဲ့ Laptop တစ်လုံး၊ Personally ပြောရမယ်ဆိုရင် GS65 က ကျွန်တော့်အတွက် လိုတာထက် ပိုနေတဲ့ Gaming Laptop လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ဒါမယ့် စာဖတ်သူတွေ အမြင်မှာ ဘာလို့ မော်ဒယ်တစ်ခုကို ၂ ခါ ခွဲပြီး ပြောရသလဲ?
ခေါင်းစဥ်မှာ In-depth သွားထားတဲ့အတွက် ဒီတစ်ခေါက် ဖော်ပြချင်တာက High-end User တွေအတွက် အထောက်ကူဖြစ်မယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဒေါ်လာ ၁,၈၀၀ လောက် အကုန်ကျခံပြီး ဝယ်လိုက်တဲ့ Laptop တစ်လုံးက ဘာ Benefits ရလဲ?
Impression လုပ်တုန်းက Build Quality ၊ Display နဲ့ Performance ၃ မျိုးကို မတို၊ မရှည် ပြောပေးထားပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ တဆင့်ချင်းသွားပါမယ်၊ အရင်ဆုံး Processor ကနေ စလိုက်ကြတာပေါ့။
Core i7-9750H ဟာ 6-cores/12-threads Processor ဖြစ်တယ်။ Based Clock က 2.6GHz ရှိပြီးတော့ Single-core ဆိုရင် 4.5GHz ၊ 2-cores ဆိုရင် 4.4GHz ၊ 3-cores ဆိုရင် 4.3GHz ၊ 4-cores ဆိုရင် 4.2GHz ၊ 5-cores ဆိုရင် 4.1GHz နဲ့ 6-cores လုံး Run မယ်ဆိုရင် 4.0GHz Boost Speed ရှိမှာပါ။
i7-8750H နဲ့ယှဥ်ရင် Turbo Frequency (4.5GHz vs 4.1GHz) ပိုများပြီး L3 Cache Size 12MB vs 9MB ကွာပါတယ်။ Real-time စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်းမှာတော့ No Improvement လို့ ပြောနိုင်တယ်။ Coffee Lake i7 လိုပဲ TDP ဒီဇိုင်းကို 45W နဲ့ ထွက်ရှိထားပြီး 35W ထိ Configure လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Intel Processor အများစုက 45W ထက် ပါဝါသုံးစွဲလေ့ရှိတာကြောင့် msi Gaming Laptop က ဘယ်လောက်ထိ ခွင့်ပြုထားလဲ? Turbo Frequency ကို ဘယ်လောက်ထိ ထိန်းပေးနိုင်လဲ ကြည့်ကျတာပေါ့။
Default အတိုင်းဆိုရင်တော့ Turbo Boost Short Power Max ကို 90W ထိ ထောက်ပံ့ထားပြီး Long Boost အတွက်ကိုတော့ 70W Power Max ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
Cinebench R15 64bit Default Temp °C Undervolt Temp °C Cooler Boost + Performance Temp °C
Single 169 81 171 80 170 80
Multi 1120 83 1126 81 1121 82
Short Boost ဆိုတာ Single-Core တစ်လုံးထဲ Run ရင် သုံးမယ့် Power Limit လို့ ရည်ညွန်းတာဖြစ်ပြီး Benchmark Result တွေအရ 4.5GHz Speed ကို Boost တယ်၊ အများဆုံး 68W အထိ သုံးစွဲပြီး 6-cores Active ဆိုရင် PKG Power က 50W ~ 60W အကြားပြေးပါတယ်။
ဒီပုံစံတိုင်း အမြဲ Run နေတာ မဟုတ်ပေမယ့် 2.6GHz Based Speed ကျော်နေတဲ့ Range မှာ အများဆုံး 3.5 ~ 3.6GHz အတွင်း Maintain လုပ်နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Better Turbo Frequency
I7-9750H က Single-core 4.5GHz Speed ကို Short Burst အနေနဲ့ Run ပေမယ့် PKG အပူချိန်က တစ်ခါတရံ 90° C ကျော်သွားတဲ့အတိုင်း Processor ထုံးစံအတိုင်း Throttle ဖြစ်တယ်၊ Stable ဖြစ်တာ 76° ~ 78°C Range အတွင်းမှာငြိမ်နေလေ့ရှိပြီး 3980MHz ~ 4GHz ဝန်းကျင်ရှိတတ်ပါတယ်။
အဲ့လိုပဲ 6-cores Active ဆိုရင် 3.6GHz Speed မှာ ငြိမ်နေပြီး Based Frequency နဲ့တိုင်းကြည့်ရင် 0.9GHz (900MHz) လောက်ကို တင်ပေးနိုင်တယ်။ အဲ့အချိန်မှာ CPU Temperature က အများဆုံး 80° C အထိ ရှိနိုင်ပြီး သုံးနေတဲ့ Program အလိုက် Turbo Frequency တင်ပေးနိုင်တယ်။
အထူးသဖြင့် ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ Processor Performance က Consistent ဖြစ်နေပြီး Throttling မဖြစ်တဲ့အတွက် Smooth Experience ရတယ်။ အပူချိန်ကလည်း Record ယူထားသလောက် 78° ~ 81° C ရှိတဲ့အတွက် Thin & Light Gaming Laptop တွက် Cooling Solution က Sufficient ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထွက်လာတဲ့အပူကို Handle မလုပ်နိုင်သေးဘူး၊ Impression လုပ်တုန်းက GS65 အဓိက အားနည်းချက်က Thermal Design ဖြစ်နေတယ်၊ Long Session ကစားဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အချက် လက်နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ Palm Rest နေရာ တင်မရတဲ့အထိ Heat တက်ပါတယ်။
Cooler Boost သုံးရင် Processor Temperature 73° C လောက်ထိ ကျသွားနိုင်ပေမယ့် ဆူညံတယ်၊ ဖုန်စုပ်စက် ဖွင့်မထားရုံတမယ် နှောက်ယှက်ပေးပြီး Performance ပိုင်း အရမ်းကွာမသွားဘူး။ အားနည်းချက်တစ်ခုက အပူကို အောက်ဖက်ကစွန့်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Idle State မှာတောင် ပေါင်ပေါ်တင်သုံးဖို့ အဆင်မပြေဘူး။ CPU Temperature 37° C ရှိပေမယ့် Ultrabook တွေလို မသုံးနိုင်တာ ဂွပ်ကျစရာ။
GS65 with mid-range Turing
ဒီလိုဆိုတော့ Graphics Card အပိုင်းဆက်ရအောင်၊ GS65 ရဲ့ Thermal Performance ကောင်းနေတာ Mid-range ကတ်ဖြစ်တဲ့ GTX 1660 Ti သုံးထားတာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Total Graphics Power (TGP) 80W ဖြစ်တဲ့အတွက် Max-Q (Not maximum Quality) ကတ်တွေနဲ့ ယှဥ်ရင် Full Potential အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
16-series Turing ကတ်တွေဟာ DirectX 12 ထောက်ပံ့တဲ့အတွက် GTX 1070 နဲ့ယှဥ်ရင် Average5~ 10% ပိုမြန်မယ်၊ GTX 1060 နဲ့ 1050 Ti တို့နဲ့ဆိုရင်တော့ 30 ~ 50% လောက် ကွာမယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် RTX 2060 နဲ့ ပြောရင်တော့ 10 ~ 15% လောက် ပိုနှေးပါတယ်။
အဲ့တော့ Gaming Laptop ဝယ်ဖို့စဥ်းစားနေရင် Mid-range Class မှာ GTX 1660 Ti က သင့်တော်သလို Ray Tracing နဲ့ DLSS မပါလင့်ကစား တိုင်ပတ်နေတတ်တဲ့ RTX 2060 ထက် Reasonable Choice ဖြစ်စေတယ်။
6GB GDDR6 GTX 1660 Ti
တကယ်လို့ Ray Tracing သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ RTX 2070 လောက်သုံးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ GS65 9SD နဲ့ သုံးရသလောက် အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ AAA ဂိမ်းတွေနဲ့ eSports ဂိမ်းတွေကို 60Hz/144Hz အပြည့် Run တဲ့အခါ GPU Speed က +1550MHz Boost ပါတယ်။
CPU GPU Combined
PC Mark 8 5749 – –
3D Mark 11 (1280 x 720) – 24920 12720
Temperature ကလည်း Ultra-high Setting ကစားဖြစ်တဲ့ The Witcher3၊ Control ဂိမ်းတွေမှာသာ တစ်ခါတရံ 78° C ကျော်သွားပါတယ်။ Average fps ကိုလည်း 60fps Run ပေးနေတဲ့အတွက် 1080p Gaming အတွက် Nice လို့ ပြောရမှာပါ (ဒါမယ့် စျေးကြီးတယ်၊ Heat တက်လွယ်တယ်)
Ultra Preset Graphics Setting Frame per Second (fps) CPU Temp °C CPU Speed (GHz) GPU Temp °C GPU Speed (MHz)
DOTA2156.4 78 ~477 1520 +
CS:GO 244.3 85 ~478 1490 +
The Witcher354.3 73 ~472 1450 +
Shaodow of the Tomb Raider RT Off ~ 74 72 ~471 1450 +
Assassin’s Creed Odyssey 51.4 73 ~474 1520 +
Max Memory ကို 64GB ထိ Support ပေးတယ်ဆိုမယ့် Review Unit မှာ 8GB ၂ ချောင်း အတိကျပြောရင်တော့ PC4-21300 DDR4 SDRAM SK Hynix အမျိုးစားကို2Slot သုံးပေးထားတာပါ။
GS65 မှာ SSD Slot ၂ ခုပါဝင်ပြီး Primary ကို NVMe PCIe Gen3x4 အမျိုးစား သုံးထားပါတယ်။ ဒုတိယတမျိုးက Combo Slot ဖြစ်ပြီး M.2 Interface ကိုမှ NVMe PCIe Gen3x2 နဲ့ SATA ၂ မျိုး ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
SSD Benchmark Info
Review Unit မှာတော့ Primary SSD တစ်မျိုးပဲ အသုံးပြုထားပြီး WD 512GB SSD ဖြစ်ပါတယ်။ Benchmark အရ Sequential Read/Write Speed က 3300MHz နဲ့ 2700MHz Range မှာရှိပါတယ်။
Gaming or Content Creation?
ပြောချင်တာ i7-9750H Processor နဲ့ GTX 1660 Ti သုံးထားတဲ့ Gaming Laptop ဟာ Gaming or Creation ၂ မျိုးလုံးတွက် Powerful ဖြစ်တဲ့ Specs လို့ ပြောနိုင်တယ်။
GS65 မှာ msi သွားထားတဲ့ Approach က Gaming ဆိုတာထက် Productivity ပိုင်းနဲ့ Content Creation ပိုင်းအတွက်ပါ အဆင်ပြေတဲ့ အနေထားရှိနေပါတယ်။ Personally ပြောရရင် Content Writing ဦးစားပေး လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် Ultrabook တွေအစား GS65 ကို ရွေးချင်တဲ့ အချက်တချို့ရှိပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ 80Whr Battery သုံးထားပြီး Nvidia Optimus ၊ System Optimization ကောင်းတဲ့အတွက် 80% Battery မှာ အင်တာနက်သုံးရင်း သီချင်းနားထောင်၊ YouTube ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင် 6hrs+ ရပါတယ်။
၁ နာရီနဲ့ မိနစ် ၃၀ စာ H.264 BluRay တကားကြည့်ရင် 20% Battery Usage ရှိတဲ့အတွက် Competitors တွေနဲ့ ယှဥ်ရရင် Good Job လို့ ပြောရမယ်။ ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင် Power Limit (CPU: 2.6GHz ၊ GPU:550MHz) ရှိပေမယ့် Average ၁ နာရီခွဲကစားနိုင်တယ် (ဒါမယ့် ဘယ်တော့မှ ဘက်ထရီနဲ့ ဂိမ်းမဆော့ဖြစ်ဘူး)
Display ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း Impression မှာတုန်းက One of the best လို့ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်လို Content Writer/Gamer တစ်ယောက်အတွက် လိုတာထက် ပိုပါတယ် (ဆိုလိုတာ ဂိမ်းလည်းဆော့ချင်တယ် အလုပ်လည်းလုပ်မယ်ဆိုရင် GS65 ကို စဥ်းစားမိမှာပါ)
Dragon Centre or Undervolt?
အဲ့တော့ System Optimization ကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ GS65 9SD ရဲ့ Bloodline ကဘာလဲ? ထောက်ပြစရာ Dragon Centre Software ပဲရှိပါတယ်။ Laptop တစ်ခုလုံးကို Control ယူထားတဲ့ App မှာ Performance ၊ Battery ၊ Game Mode အစရှိတဲ့ Tab တွေပါဝင်ပြီး သဘောကျမိတဲ့ အပိုင်းက Performance Tab ပါ။
အဲ့မှာ Fan Control နဲ့ Power Mode ၂ မျိုးကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ၊ Individually ဖြစ်စေ ရွေးနိုင်တယ်။ Laptop Performance က Fans Control ပေါ် တိုက်ရိုက်မှီခိုထားသလို ဖြစ်တဲ့အတွက် Turbo ၊ Sport Mode ကစားရင် Cooler Boost ဒါမှမဟုတ် Auto ထားမှ Balanced ဖြစ်စေမယ့် အနေထားရှိတယ်။
Dragon Center Overview
ကျွန်တော်ကတော့ Fan Auto ထားပြီး Performance ကို Turbo နဲ့ ဆော့တယ်။ ဂိမ်းကစားတဲ့အခါ Ultra-setting မှာ 60fps ရတယ်၊ ပြဿနာတက်လာတာက Temperature 85° C ကျော်ပြီး ပန်ကာပိုလည်လာတာ သတိထားမိတဲ့အတွက် Tuning ထပ်လုပ်ရပါတယ်။
အဲ့တာကတော့ i7-9750H Core Voltage နဲ့ Cache Voltage ကို -0.125V ထိ လျှော့ပြီး စမ်းကြည့်တဲ့အခါ Thermal Performance ပိုကောင်းလာပြီး Average Temperature ကလည်း 76° ~ 78° C Range အတွင်းပဲ ရှိပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် Manual Control ပိုင်းအတွက် Tuning လုပ်နိုင်တာကလည်း ကျွန်တော် တမျိုး နှစ်သက်မိပါတယ်။ Primary Plane Limit နဲ့ Short Burst/ Long Burst Power Max တန်ဖိုးတွေကိုလည်း ပြောင်းကစားကြည့်တဲ့အခါ Very High နဲ့ Very Low မှာ Throttling ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီ Value တွေက ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမျိုးနဲ့ Daily Use အနေထားတွေမှာ မတွေ့ရတဲ့အတွက် Thin & Light Form Factor မှာ System Tuning မိုက်တယ် (ဒါမယ့် ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံး အပူတက်တာကိုတော့ ဖြေရှင်းလို့မရသေးဘူး)
အဲ့မှာ Display ပိုင်းအတွက် ထည့်ပေးထားတဲ့ TrueColor က Gimmick (Not Really Useful) ၊ Colour Profile ပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပေမယ့် Factory Calibration မှာကတည်းကိုက Near Perfect ဖြစ်ပြီးသား ဆိုတော့ မသုံးလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး (သာမန် Content Creation နဲ့ ဂိမ်းကစားဖို့အတွက် ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
အခုလို ချီးမွမ်းလို့ မဆုံးခင်မှာ ပြောစရာဖြစ်စေတာ နည်းနည်းနောနောသွင်းထားတဲ့ Bloatware တွေပါ။
msi App တွေသာမက BlueStack App Player နဲ့ Photo/Video Editing App တွေပါလာတာက Storage Space ယူသလိုဖြစ်နေတယ်။ Background မှာလည်း သွား Run နေတတ်တဲ့အတွက် မလိုအပ်ရင် ဖြုတ်ပစ်တာက အကောင်းဆုံးပါ။
Deep Sleep and GS65 Firmware
ဒါကိုတော့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ GS65 မှမဟုတ် Laptop တချို့မှာ ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပြီး ဘာလဲပြောရရင် Shutdown ချလိုက်လဲ ပါဝါသုံးစွဲမှုရှိနေတာကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် Shutdown ချလိုက်တာနဲ့ All Stop လို့ သိထားကြတာပါ။
မှန်ပါတယ်။ Shutdown ဆိုရင် အကုန်ရပ်သွားရမှာဆိုပေမယ့် Modern System တွေမှာ Active Components တွေ ရှိတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုရင် Wi-Fi Adapter ၊ Ethernet Controller ၊ Type-C Ports နဲ့ USB 3.1 Ports တို့ပါဝင်ပြီး တချို့ Motherboard Components တွေလည်း ပါတတ်ပါတယ်။
ဒီကောင်တွေက System Shutdown ဖြစ်သွားလည်း Run နေတတ်ပြီး နောက်ကွယ်မှာ ပါဝါသုံးစွဲမှုရှိတယ်။ ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ နောက်တစ်ခါ ကွန်ပျူတာ ဖွင့်လိုက်ရင် ရှိရင်းစွဲ ဘက်ထရီထက် လျော့နေတတ်ပြီး Windows ကလည်း Battery Fault ဖြစ်တဲ့ပုံစံ Error Reading ပေးတတ်ပါတယ်။
အခု GS65 မှာလည်း အလားတူ ပုံစံမျိုးကြုံနေရပြီး စာဖတ်သူတွေ သိရှိသွားအောင် ဆက်လက် ဖော်ပြပါမယ်။ ဒါကို Modern Standby ဒါမှမဟုတ် Connected Standby လို့ နောက်တမျိုးခေါ်တွင်ပြီး Windows 10 မှာ Sleep Cycle ၅ မျိုး ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။
Modern Standby ကို Ultrabook တွေ အသုံးများပြီး Connected Standby S1 ၊ S2 ၊ S3 & S4 Sleep State ကို Laptop အများစု ထောက်ပံ့ပါတယ်။ S5 ကတော့ ဘာ Active Component မှ မရှိတဲ့ Complete Shutdown လို့ ပြောချင်တာဖြစ်ပြီး ကိုယ့် Laptop ဘာ Sleep Cycle ထောက်ပံ့လဲသိချင်ရင် cmd ဖွင့်ပြီး powercfg/a လို့ ရိုက်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။
S1 ~ S4 အတွင်း ဖြစ်နေရင် သိထားဖို့က Complete Shutdown ကို မထောက်ပံ့ဘူး၊ အကယ်၍ ပိတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တောင် Active Components တွေ ရှိနေမယ်၊ ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုဟာ Sleep Cycle အလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိပြီး S1 ထက် S2 နည်းတယ်၊ S2 ထက် S3 နည်းတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
GS65 Firmware ဟာ S3 ထောက်ပံ့ထားပြီး သီအိုရီအရ Laptop ဟာ Deep Sleep Mode ထောက်ပံ့ပါတယ်။ သဘောက Sleep လုပ်ထားလိုက်ရင် Memory (RAM) တစ်ခုပဲ Run နေမှာဖြစ်ပြီး Instant Wake Feature တွေဖြစ်တဲ့ Wi-Fi Wake ၊ Ethernet Wake ၊ USB Wake Mode တွေကို ထောက်ပံ့တယ် (ကျွန်တော်ကတော့ အကုန်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်)
ဒါကြောင့် System Shutdown ထက် အသုံးမလိုရင် Sleep လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Deep Sleep မှာ 0.1 ~ 0.3W ပဲ ပါဝါသုံးစွဲမှုရှိတဲ့အတွက် တနေကုန် ပစ်ထားရင်တောင် 20% လောက်ပဲ ဘက်ထရီသုံးစွဲမှု ရှိလို့ပါ။
အနှစ်ချုပ် ပြောရင်တော့ GS65 9SD ဟာ ဒေါ်လာ ၁,၈၀၀ Price Tag ကလွဲလို့ သုံးပျော်တဲ့ Laptop တစ်လုံးပါ။ အားနည်းချက်တွေက Hinge နဲ့ အပူဆိုပေမယ့် 2.2mm Key Travel ရှိတဲ့ Steelseries Keyboard ၊ ပုံမှန်ထက် ပိုကျယ်တဲ့ TouchPad က Windows Precision Driver နဲ့ အားရစရာကောင်းပါတယ်။
ပါဝင်တဲ့ i7-9750H ၊ GTX 1660 Ti တွေကို Fine Tuning (Afterburner နဲ့ Tweak/Undervolt လုပ်နိုင်ပေမယ့် မလိုလို့ မဖော်ပြပါဘူး) Core Temperature က Thin & Light Gaming Laptop တွက် ဝန်ပေ့ါပြီး အပူနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် Drawback က Laptop တစ်ခုလုံး Heat တက်လွယ်တယ်။
ဂိမ်းမဆော့ဘူးဆိုရင်တောင် Content Creation ၊ Video Editing အတွက်ပါ ကောင်းမွန်တဲ့ Display သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Last but not Least Gaming Laptop ကောင်းတစ်လုံးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Source: GS65 9SD Homepage
Command & Conquer (C&C) Remastered Version ကြေညာလိုက်ပြီ
ဘိန်းရာဇာ Escobar နာမည်နဲ့ လိမ်ရောင်းနေတဲ့ Foldable ဖုန်း